PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Isigwebo sikaManana silulaza isithunzi sabesifazane
Isigwebo sikaManana silulaza isithunzi sabesifazane
Isolezwe - 2017-11-15 - IMIBONO -
OWAYEYIPHINI likaNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, uMnuz Mduduzi Manana, ushaywe ngoswazi oluncane yinkantolo yaseRandburg ngoMsombuluko ngesikhathi egwetshelwa amacala amathathu okushaya ngenhloso yokulimaza.
UManana kuthiwe akahlawule uR100 000 noma agqunywe ejele unyaka, uzonxephezela abagilwa ngoR26 680.40 futhi uzosebenzela umphakathi mahhala amahora angu-500.
Lesi sigwebo sithukuthelise abaningi futhi kufanele ngoba siyenza ihlaya indaba yokuhlukunyezwa ngodlame kwabantu besifazane eNingizimu Afrika. Isigwebo ebesidingeka lapha ukuthi uManana agqunywe ejele hhayi ukuthi akhethiswe ukukhokha imali noma ijele.
Lokhu kufana nokudlala nje ngoba leli cala bekufanele lithumele umyalezo nakwabanye abakwenzayo noma abacabangayo ukuhlukumeza abantu besifazane, babone ukuthi izinto ziyonakala ngempela uma wenza lo mkhuba.
Yebo okwenziwe yinkantolo kuhambisana nomthetho futhi kubhekiwe nokuthi ulivumile icala nokusho ukuthi akayibambezelanga inkantolo futhi uxolisile ngesenzo sakhe okukhombisa ukuzisola.
Kodwa-ke okubi ngalokhu ukuthi njengoba uManana edumile nje futhi lesi sigameko sibe ngundabuzekwayo, baningi abalilandelayo leli cala futhi asebesizakele njengoba sebebonile ukuthi bangawenza lo mbhedo wokuhlukumeza abantu besifazane ngodlame, bajahe ukuthi bazovuma icala, baxolise bese beyahlawula.
Abanye bazothi kanti kufunwani kuManana ngoba wehla nasesikhundleni sokuba yiphini likangqongqoshe kodwa okusalayo useyilona ilungu lePhalamende nokuwumsebenzi ohambisana nemihlomulo emihle.
Kwenzeka lokhu nje ngoMgqibelo ozayo kuzoqala umkhankaso walo nyaka wezinsuku ezingu-16 wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane okuzobe kukhulunywa kuwo kuliwa nalesi sihlava.
Izigwebo ezinjena zenza abantu babuze ukuthi akusikho yini ukudlala ngesikhathi ukwenza le mikhankaso ngoba umthetho awukafinyeleli lapho kufanele kwenze wonke umuntu asabe uma ecabanga ukuhlukumeza umuntu wesifazane noma ingane nanoma ngabe iyiphi indlela.